Stock inokosha kubva kumativi ose enyika. Dashboard yako pachako nemitengo, zvinyorwa zvemauto, mutengo wematengo charts uye capitalization yemakambani anobva kumativi ose enyika.
Maminitsi mashanu Maminitsi gumi nemashanu Nguva imwe neimwe
Ratidza: mutengo nhasi mutengo wemari misika kadhi yekemakadhi chati dhizha rekutengeserana nhamba yebhizimisi chati
AAPL = 161.13
kuchinja kwekushandurwa kwemari kubvira
Apple Inc. mutengo wemari yakaitika
Apple Inc. mutengo wemakesi
2 659 869 523 968
+180 226 359 296 (+7.27%)
shanduko ye capitalization kubvira
Isa iri widget pane webhusaiti yako kana bhurogi.
GOOG = 2 832.61
1 848 096 718 848
-106 560 356 352 (-5.45%)
MSFT = 322.30
2 424 153 571 328
-109 789 577 216 (-4.33%)
AMZN = 3 371.37
Amazon.com, Inc. mutengo wemari yakaitika
Amazon.com, Inc. mutengo wemakesi
1 709 781 024 768
-76 105 121 792 (-4.26%)
FB = 304.32
Facebook, Inc. mutengo wemari yakaitika
Facebook, Inc. mutengo wemakesi
847 117 352 960
-89 871 286 272 (-9.59%)
Stock quotes munguva chaiyo, matengo ematengesi kubva kune yekutengeserana kwenyika yose. Iko mari yezvikamu zvekambani nhasi.
Historical data pamusoro pekukosha kwezvikamu zvemakambani kubva kumativi ose enyika.
Kubatsirana kwemasangano uye kuwandisa kunoshandiswa muhomwe yega yega zvichienzaniswa negore rakapera remakambani ose kubva kumativi ose enyika.
Nhepfenyuro yemari yemari pamusoro pechibereko nekurasikirwa kwemakambani pasi pose.
Ita yako yekusimwa chikwereti kubva kune zvaunofunga kuti zvakakosha.
Allstockstoday.com ndiyo yakazara yakazara pamhepo yekutengesa mishumo kutengesa pasi.
Isu tinoratidza munguva chaiyo zviratidzo zvakadai zvemakambani emusika wepasi:
Mitengo yekutengesa yemakambani kutenderera pasi rese online
Chaiwo-nguva yekutengesa mutengo wekambani
Mari yemutengo weiyo kambani iri pamusika wekutengesa
Capitalization yemakambani nhasi
Inotarisisa pane migove yemakambani yenguva yekupedzisira yekuzivisa
Nhoroondo yekutengesa quotes yemakambani
Income yemakambani nenguva mumusika wekutengesa
Zviyero zvemakambani anobatsira kwazvo uye anonyanya kubatsira
Iko kwekudyara, online yakanyanya mari yekuverenga
Sevhisi yega yega inoshanda yemahara uye munguva chaiyo.
Yese data inotorwa kubva kune yakavhurwa masosi uye inounganidzwa nemapurogiramu edu mune nyore online services.
Online stock quotes emakambani kutenderera nyika ishumiro huru yesainzi. Iyo inoratidza kukosha kwechitoro chekambani yega yega nhasi. Iwe unogona kuona mutengo wekutengesa weanenge chero kambani. Kuti uende kunzvimbo yemitengo yezvitoro, tinya apa:
Chaiwo-nguva yekutengesa mutengo
Kukosha kwemugove wekambani munguva chaiyo kana mutengo wedhiza wekambani kana mutengo wemasokisi emakambani unounganidzwa kubva kune chaiko kutengesa kwekuchinjana kupota nyika uye kunoratidzwa pawebsite yedu.
Mutengo wemasheya emakambani unoshandura zuva rega rega, uye iwe unogona kugara uchiona mutengo wemasheya ekambani nhasi nhasi kune allstockstoday.com
Mutengo wepamusika mutengo wekodhi yekambani
Mutengo wepamusika wemutengo wekambani - chiratidzo chinomiririra chemutengo wekodhi wekambani yanhasi uye nhoroondo yemitengo yezvitoro Online maratidziro emitengo yemitengo kune chero kambani pasi pano iwe yaunogona kuona muvhisi:
Mifananidzo iri paIndaneti
Kubudirira kwemakambani nhasi - kukosha kwakazara kwekugovana kwekambani nhasi.
Iko capitalization yekambani chero ipi inoshandura zuva rega rega, sezvinoita kukosha kwemigove yayo. Iko capitalization yemakambani inokanganiswawo nehuwandu hwekugoverana kukambani ino, iyo inogona zvakare kuchinja chero nguva.
Basa redu repamhepo rinoratidza capitalization yekambani yega yega munyika. Kuti uishandise, tinya pane iyi link:
Kuparadzaniswa pamigove yemakambani kwenguva yekupedzisira yekubika ndeimwe yehunhu hwakakosha hunokanganisa purofiti yechikamu, huwandu hwemhindu kubva mukudyara mari muvashandisi mune ichi chikamu.
Misiyano pamabelo inogovaniswa neruzhinji ruzivo uye imwe neimwe nguva yekushuma inogadzirwa kambani yega yega.
Iwe unogona kutarisa saizi yemigove yezvikamu zvekambani yega yega yekupedzisira nguva yekubika, pamwe nedzimwe nguva dzekubika muchikamu chedu, iyo inonzi:
Nhoroondo yemitengo yezvitoro
Nhoroondo yekutenga kwemakambani emakambani kwenguva dzakasiyana dzenguva inowanikwa online mumasevhisi edu. Saka iwe unogona kuona for free:
nhoroondo yekutenga kwemitengo yemakambani pazuva
vhiki yega yega mutengo wenhoroondo
pamwedzi yemitengo yemitengo nhoroondo yemakambani
Nhoroondo yezvitoro zvemakambani zvegore
Kuti uone nhoroondo yemitengo yemasheya yekambani yega yega, shandisa iyo link:
Kubatsira kwemakambani nhasi - kukosha kwekuziviswa zviri pamutemo purofiti yezvazvino zvemari zvemakambani. Pa webhusaiti yedu iwe haugone kungoona kukosha kweiyo purofiti yekambani yanhasi, asi zvakare ona iyo kambani purofiti kune imwe nguva yekubika.
Iyo purofiti yekambani hunhu hunokanganisa zvakanyanya kosi uye kukosha kwesitoko mangwana.
Iyo "kambani purofiti" sevhisi inowanikwa kune:
Mari inowanikwa nemakambani nenguva mumusika wekutengesa
Mari yekutengesa yemari yekutengesa yenguva imwe neimwe yenguva yakakosha ruzivo rwemutengo we stock. Iko kukosha kwechikamu kana mutengo wayo kune yakakura zvikuru kunozivisa iyo mari yekambani kune dzakasiyana nguva dzekubika.
Pasi pemari yekuchera nhasi nzwisisa mari inowanikwa nekambani yenguva yekupedzisira yekubika.
Pano iwe unogona kuona mari yemakambani semazuva ano, uye nhoroondo yemari yekambani maererano nemishumo yapfuura.
Service "Kambani Mari" iri pano:
Nzvimbo dzemakambani anobatsira kwazvo uye anobatsira kwazvo anosanganiswa pachayo zvichibva pamitengo yezvitoro kubva kupasi rese.
Pamhepo sitendi chiyero ndechimwe chakakosha masevhisi kune vanoita mari kutenderera pasirese. Chiyero chemakambani anobatsira chiri kuchinja zuva nezuva. Haisi chakavanzika kuti mainini vanobhadhara mari vanoitwa chaizvo mumakambani anobatsira kwazvo.
Iwe une mukana wekuona kwemahara chiyero chemakambani anobatsira kwazvo munyika mune basa redu:
Iko kwekudyara mari, online calculator yemari yakawandisa ndeye yakasununguka inogadziriswa basa resaiti yedu. Iwe unogona kusarudza akasiyana maitiro emakambani kuti unzwisise kwekudyara mari:
shanduko mumitengo yemakambani emakambani
migove: kuwanda uye huwandu hwemabhadharo
zviratidzo zvemari senge purofiti, purofiti, nhamba yezvinhu
Iwe unozvisarudzira kupi kwekudyara mari yacho, asi sevhisi yedu ichakubatsira kusarudza mashoma emakambani anobatsira kwazvo kuita mari kubva pamakumi ezviuru zvevamwe.